Vaovao - Ny lanonana fanokafana ny Mersen Zhejiang Co., Ltd. dia natao tamin'ny 5 novambra tolakandro
Ny lanonana fanokafana ny Mersen Zhejiang Co., Ltd. dia natao tamin'ny 5 Novambrath tolakandro Nanao kabary ny lefitry ny sekretera lefitra ary ny sefon'ny distrikan'i Changxing County Yiting Shi.
Tao amin'ny kabariny dia nilaza i Yiting Shi fa ny fivoaran'i Changxing dia tia liona mpandihy foana, feno hafanam-po sy hery, satria manana ny fihetsika "misokatra malalaka" sy miresaka amin'izao tontolo izao ary mivoatra am-pahavitrihana isika. Na dia voakasiky ny COVID-19 sy ireo anton-javatra hafa aza tamin'ity taona ity, dia nihazona ny fahatapahan-kevitray izahay ary nanao ezaka lehibe indrindra hampihenana ny vokany. Tao anatin'ny telovolana telo voalohany, ny tondro ara-toekarena an'i Changxing dia nalahatra voalohany tao amin'ny faritanin'i Zhejiang sy ny tanànan'i Huzhou. Tetikasa fampiasam-bola avy any ivelany 38 no nampidirina, ary nahazo vola 270 tapitrisa Dolara amerikana ho renivohitra vahiny. Mandritra izany fotoana izany ny sandan'ny fanondranana dia nitombo 31%
Nilaza i Yiting Shi tao anatin'izay taona lasa izay, miaraka amin'ny tanjona hamolavola faritany izay manana tontolon'ny asa tsara indrindra any Shina, dia nanao izay ezaka rehetra natao i Changxing hamoronana faritany iraisam-pirenena, ara-dalàna ary mety. Nahasarika tetik'asa avo lenta be dia be teto an-toerana sy tany ivelany, toa an'i Mersen, Clarios ary Geely. Changxing koa dia nanamboatra orinasa tena tsara teto an-toerana izay nahazoana vola mihoatra ny CNY 100 miliara, toa an'i Tianneng sy Chaowei. Changxing dia hitazona hatrany ny tontolon'ny asa aman-draharaha miaraka amin'ny fampiasam-bola sy varotra mety kokoa, fifaninanana ara-drariny kokoa ary serivisy governemanta mahomby kokoa amin'ny ho avy. Izy io dia hanompo ny famokarana sy ny fiasan'i Merson amin'ny fony manontolo, izay hanampy an'i Mersen ho lasa mpamatsy lehibe indrindra ny fuse indostrialy. Changxing dia hanome serivisy avo lenta sy mahomby mitovy aminy raha miorim-ponenana any Changxing ireo orinasa ambony sy ivoho Mersen, izay hampiroborobo ny fivoaran'ny rojom-pandrosoana ary ho lasa vondrona indostrialy faran'izay haingana.
Mersen Zhejiang Co., Ltd. dia ampiasain'ny orinasa frantsay voatanisa, izay misy milina fanorohana tsindrona, ivon-toeran'ny milina CNC, tsipika famokarana, totohondry, lathe, milina fitotoam-bary radial ary famokarana hafa ary fitaovana fanampiana. Taorian'ny fahavitan'ity tetik'asa ity dia singa elektrika 37,6 tapitrisa no azo vokarina isan-taona, ary ny tombam-bidin'ny vokatra isan-taona dia manodidina ny CNY 160 tapitrisa izay hahazo CNY 11,2 tapitrisa tombony ary CNY 10,14 tapitrisa ho vola miditra.